Dib-u-eegis ku saabsan iPhone-ka ayaa bilaabmaya sannadihii la soo dhaafay | Wararka IPhone
10 sano oo la siidaayay: dib ugu laabo 2007
Luis del Barco | | Terminalka IPhone
Bishii Juun 29, 2007 waxay ahayd maalinta loogu talo galay sannadka ee dad badan oo ku nool Mareykanka bilooyin. Gaar ahaan, tan iyo Janaayo 9-keedii hore Steve Jobs ayaa adduunka loo soo bandhigay hab lagu fahmo taleefanka si aan hore loo arag taasina wali way jirtaa maanta. Aragti meesha teknolojiyaddu ay uga dhoweyd sidii hore abid isticmaalaha taasna waxay ku dhammaan doontaa in shirkadaha intiisa kale suuqa lagu sii daayo sannadaha soo socda.
Bishii Juun 29, 2007, taleefankii ugu horreeyay ee Apple ayaa la iibiyay, waana sharadkiisii ​​ugu weynaa illaa iyo hadda. Waxay ahayd darajadii ugu horreysay ee suunka. Lebenkii ugu horreeyay ee lagu dul dhiso qayb cusub oo shey ah oo maanta durba waa qeybta ugu muhiimsan shirkadda. IPhone-ka asalka ah. Maanta waa XNUMX guuradii.
1 Juun 29, 2007: Maalinta Rajada
2 Julaay 11, 2008 - Xaqiijin
3 Juun 19, 2009: Qaabka "S" ayaa bilaabmaya
4 24-kii Juunyo, 2010: kor u kac ku yimid magac
5 Sebtember 9, 2011: Siri, ma waxay tahay iPhone 4S kaamil ah?
6 Sebtember 21, 2012: iftiiminta weynaanta
7 Sebtember 20, 2013: oo raad reebaysa
8 Sebtember 19, 2014 - oo ka weyn sidii hore
9 Sebtember 25, 2015: nolosha oo midabkeedu yahay casaan
10 Maarso 31, 2016: yar, laakiin xoogsheegasho
11 Sebtember 16, 2016: sawirka ugu aaminka badan ee iPhone
Juun 29, 2007: Maalinta Rajada
Jimcaha waxay ahayd oo ay tahay maalin dhaqan ahaan ay sida aadka ah u sugayaan shaqaalahan dhammeeya shaqadooda usbuucii maalintaas, sidaasna loo siiyo dhammaadka usbuuca. Si kastaba ha noqotee, Jimcahaas wuxuu ahaa mid si gaar ah loogu calaamadeeyay jadwalka dhammaan kuwa doonaya inay helaan mid ka mid ah unugyada qalabka cusub ee soo jiidashada leh ee Apple ay iibisay.
Maalintaas, iyada oo aan ogayn, Waxay bilaabeen dhaqan ilaa maanta sii jira taasina waa wax kale oo aan ahayn safka saacadaha iyo xitaa maalmo ka hor inta aan iPhone cusub la iibin. Wax sidan oo kale ah weligood lama arkin shirkad kale oo ka tirsan qaybta ayaa ku guuleysatay inay ku celiso ilaa hadda. Way cadahay in iPhone-kani aanu ahayn uun shey kale.
Mid ka mid ah faallooyinka ka tarjumaya dareenka wakhtigaas ayaa ah midka uu muujiyey adeegsadaha daabacaadda Macworld, halkaas oo ka dib markii uu u sheegay inuu aaday safka albaabada Apple Store isagoo wata iPod, PDA iyo taleefanka gacanta, ayuu sii raaciyay:
Maanta saddex shay ayaan jeebka ku sitaa. Berri mid uun baan yeelan doonaa.
Nooca ugu horreeya ee iPhone-ka ayaa lagu soo bandhigay dhowr 270.000 oo unug ayaa la iibiyay soddonkii saacadood ee ugu horreeyay kadib markii si rasmi ah loo sii daayay. Waxba laguma sameeyo tirooyinka hadda la maareeyay, laakiin waa guul u soo hoyntii ugu horreysay ee badeecad jabisay qorshayaashii jiray.
Julaay 11, 2008 - Xaqiijin
Sannad uun kadib markii isticmaaleyaashii ugu horreeyay ay awoodeen inay gacanta ku dhigaan iPhone-kii asalka ahaa, nooc cusub ayaa la iibiyay oo saxay qaar ka mid ah khaladaadkii kii hore sameeyay. IPhone 3G ayaa u yimid xaqiijiso ballanqaadka Apple ee taleefanka gacanta oo aan sii odoroso mustaqbal buuxa oo war xawli ku socda. Sidii bay noqotay.
Soo bandhigida App Store iyo isku xirka 3G oo ku filnaaday inay adeegsadayaashu mar kale saf ugu galaan hortiisa dukaamada shirkadda wax ka yar sanad markii la sii daayay ka hor, wax aan caadi ahayn markii taleefannadu socdeen sannado.
Juun 19, 2009: Qaabka "S" ayaa bilaabmaya
Markii la soo saaray IPhone 3GS Apple waxay soo jeedinaysaa qorshe uu ku sii wado inuu si adag u ilaaliyo: sanad cusbooneysiin bilic leh oo nambarka nambarku isbadalo iyo mid cusbooneysiin gudaha ah oo "s" lagu daro kadib. Isku naqshad isku mid ah laba sano oo isku xigta? Waxay noqon laheyd lagama maarmaan in lala qabsado.
24-kii Juunyo, 2010: kor u kac ku yimid magac
Daahfurka iPhone 4 wuxuu ahaa tallaabo adag oo loo wajahay tartankii soo ifbaxayay sanadihii la soo dhaafay. Afar maalmood gudahood ayay Apple awood u yeelatay inay dhigato 1,7 milyan oo unug oo ah iPhone 4, Habka ugu qiimaha badan uguna muuqaalka wanaagsan bilicsanaanta illaa iyo hadda. Naqshadeynta ayaa muhiim ah, iyo wax badan.
Tirada dadka safafka ugu jira maalintii la bilaabay ayaa kordhay, hadda, xaaladdu waxay umuuqatay mid caadi ah markii la bilaabay.
Sebtember 9, 2011: Siri, ma waxay tahay iPhone 4S kaamil ah?
Sannadkan wuxuu calaamad u yahay taariikh muhiim ah taariikhda Apple markii uu yimid kaaliyihiisii ​​taakulaynta ahaa ee taleefannada casriga ah. In codka "gudaha" aaladdu ay qaban karto hawlo fudud kana jawaabi karto su'aalaha waxay umuuqatay inay matalayso kacaan yar oo loogu talagalay kuwa mustaqbal ku eegay hawo riyadeed. Diiwaankii ugu horreeyay ayaa markaa iman lahaa: in ka badan 100 milyan oo iphone ayaa la iibiyay adduunka illaa iyo hadda.
Sebtember 21, 2012: iftiiminta weynaanta
Kii shanaadna waa yimid. Khiyaanada ugu weyn ee ugu horeysa ee balanqaadka ah in shaashadaha yar yar ay ka fiican yihiin oo aan la weyneyn. Dabcan, guusha waxay ahayd mid muuqata: in kabadan 5 milyan oo qalab ah oo la iibiyay seddex maalmood.
Sebtember 20, 2013: oo raad reebaysa
Sannadkan waxaa la arkay mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyada muhiimka ah ee Apple taariikhda oo dhan: soo bandhigidda sawirka faraha oo ah hab lagu furi karo boosteejada. Kuwa kale miyay hore u sameeyeen? Haa. Haddii kuwa kale ay wax ka sii fiican sameeyeen? Maya. Aqoonsiga Taabashadu wuxuu ahaa caddeynta rasmiga ah ee Apple ayaa dhigay kombaaska oo inta soo hartay soo saareyaashu waxay ku cayaareen wiilkooda.
Sebtember 19, 2014 - oo ka weyn sidii hore
Waxaa jira fiidiyowyo badan oo lagu muujinayo soo-saarista iPhone 6. Midkoodna uma fiicna sida kan.
Wax yar ma qiyaasi karno markaa in Apple sidoo kale uu la qabsan doono baahida suuqa ee shaashadaha waaweyn si looga jawaabo kororka caan ku ah isticmaalka maqalka ee qalabkan. Dhowr bilood oo waalli ah markay timaaddo daadinta iyo xanta, iPhone 6 iyo mammoth 6 Plus waxay sameeyeen muuqaal.
Baahnayn in la sheego, jawaabta isticmaale ee isbadalkan waxay ka badnayd mid wanaagsan. Waxay ahayd lagama maarmaan in la huro qiyamkii hore si loola jaanqaado seenyada cusub iyo, si kadis ah, loo gaaro labalaab tirada iphone-yada la iibiyey sadexda maalmood ee hore marka loo eego iPhone 5: in ka badan 10 milyan.
Sebtember 25, 2015: nolosha oo midabkeedu yahay casaan
Midabka casaanka ayaa yimid 3D Taabashana waa yimid, tiknoolajiyadda ugu khuseysa iPhone-ka tan iyo Touch ID. IPhone 7 ayaa marar badan lagu sifeeyay inuu yahay qaab 'kala guur' oo ah waxa aan arki doonno sanadkan, laakiin qorista tan waa lama huraan inay aniga ila tahay IPhone-ka dhabta ah ee sameeya isku xidhka ayaa ahaa 6s, oo ay ku jiraan hagaajinta aakhirka u rogi doonta tan xigta qaabka ugu fiican. Immisa iPhone oo casaan ah ayaa la iibiyay seddexdii maalmood ee ugu horreysay helitaanka? Ma garanayno, laakiin waxaan ognahay in wadarta kuwa casaanka ah lagu daray kuwa kale oo leh midabbo caajis ah - oo aan 'qabow' lahayn - in ka badan 13 milyan oo unug.
Maarso 31, 2016: yar, laakiin xoogsheegasho
Waxaa igu qasbay inaan sameeyo qaansadan yar si aan u xuso soo bandhigida iPhone SE, oo maanta daboolaya farqiga u dhexeeya suuqa ee iPhone 5c uusan waligiis qaadan karin waana taas doorashada ugu xoogan ee taleefannada yaryar waxay ka dhigan tahay. Qofna ma awoodo inuu waxbadan ku bixiyo meel aad u yar.
Sebtember 16, 2016: sawirka ugu aaminka badan ee iPhone
Kii ugu dambeeyayna waa yimid. Habka ugu dhameystiran iyo kan awood u siinaya bixinta ugu fiican Apple illaa iyo hadda. Ka fog dhaleeceynta ilaalinta naqshadeynta dibedda oo aad u la mid ah (ama ku dhowaad isku mid ah) 6 iyo 6s, waxaa jira lambarro iib ah oo muujinaya tirooyin gaaraya 78.3 milyan oo unug oo lagu iibiyey dhammaan baaxadda iPhone-ka intii lagu jiray rubucii ugu horreeyay ee maaliyadeed ee shirkadda. Ma jiro xog rasmi ah oo ku saabsan iibka 7 iyo 7 Plus oo gooni gooni ah.
Iyada oo bishii Luulyo mar hore dhammaatay, xagaagan waxaa loo soo bandhigay inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon sannadihii la soo dhaafay iyada oo ay ugu wacan tahay mugga badan ee daadinta ee lagu qiyaasi karo dulucda. Qaar ka mid ah qeexitaannada tusaalaha soo socda ayaa horeyba loo qeexi karaa, kuwa kalena waa mala-awaal kaliya. Si kastaba ha noqotee, hal shay ayaa umuuqda mid cad: waxkastoo yimaada sanadkaan, Waxay mar kale beddeli doontaa sida aan u adeegsanno, ula macaamilno una fahamno fikradda iPhone. In yar ayaa hadhay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » 10 sano oo la siidaayay: dib ugu laabo 2007
Adrian M dijo
Waxaan shaki weyn ka qabaa in Apple waligeed beddeli doonto habka aan ula macaamilno ama fikradda iPhone-ka markale. Apple oo aan lahayn shaqooyin ayaa lumiyay suuq iyo hal-abuurnimo. Waxay u muuqataa in aragtidooda muddada-dheer hoos loo dhigay. Ceeb
Jawaab Adrian M
Anigu waxaan ahay isticmaale iPhone, laakiin waxaan dareemayaa in hal-abuurnimada aan u soconno safka, waxaan haystay S8 oo lagu daray mana jecli nidaamka qalliinka, laakiin qaabeynta waxay u rogmaysaa iPhone kun jeer, waxay umuuqataa moobil laga bilaabo mustaqbalka soo socda mid ka mid ah la soo dhaafay.
Koogeek wuxuu si rasmi ah u bilaabayaa guluubka loo yaqaan 'WiFi Smart LED light'
Snapchat wuxuu isku dayaa inuu ku hagaajiyo xogtiisa cusbooneysiinta cusub